အနာဂတ်ကိုဟောကိန်းထုတ်တဲ့ Manga ကြောက်စရာအလွန်ကောင်းတယ်။ ကပ်ဆိုးကြီးဟာ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၃ လပိုင်း – မှန်ကန်နေတယ် - JAPO Japanese News
ဟူး 18 Aug 2021, 13:38 ညနေ
အနာဂတ်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းတဲ့ Manga ဆိုတွေက ဟိုးယခင်အချိန်ကလည်းအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။
တော်တော်လေးရှေးကျတဲ့ Manga ဆိုရင်တော့၊ ၁၉၅၂ ခုနှစ်ကနေ ၁၉၆၈ ခုနှစ်အထိရေးထားတဲ့ Manga၊ 鉄腕アトム(Astro Boy) ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ Manga မှာအနာဂတ်ရဲ့ဂျပန်ဟာ ဒီလိုဖြစ်မယ်လို့ကြိုတင်ခန့်မှန်းခဲ့ကြပါတယ်။
အဆောက်အအုံတွေရဲ့ကြားကို ဖြတ်ပြီးပြေးတဲ့အမြန်လမ်းမကိုရေးဆွဲထားပေမဲ့၊ မျက်မှောက်ခေတ်တိုကျိုမှာလည်း မြို့တော်အမြန်လမ်းမဟာ အဆောက်အအုံကြားကို ချိတ်ဆက်နေသလိုပဲ တိုးတက်လာပါတယ်။
ဒါဟာပထမဆုံးပြီးမြောက်ခဲ့တာက ၁၉၆၂ ခုနှစ်ဖြစ်ပြီး၊ အဆောက်အအုံကြားကိုဖြတ်သန်းသွားလာနိုင်တာက အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
Manga ရဲ့ ကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုက ပိုပြီးစောနေတယ်ဆိုတာ အားလုံးနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
AKIRA ဟာအိုလံပစ်ရော၊ ကိုရိုနာကိုပါ ကြိုတင်ခန့်မှန်းခဲ့
အဲ့ဒီ Manga ကို ၁၉၈၂ ခုနှစ်မှာစတင်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး၊ အချိန်ကာလအားဖြင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်ရဲ့အနာဂတ်ကို အပြည့်အစုံဟောကိန်းထုတ်ထားပါတယ်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်ရဲ့ တိုကျိုအိုလံပစ်ဟာ ဒီအချိန်မှာသတ်မှတ်ထားစရာအကြောင်းမရှိပေမဲ့၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်ဆိုတဲ့အချက်အထိ လုံးဝကိုက်ညီနေပါတယ်။
နောက်ပြီးရပ်ပစ်မယ်ဆိုတဲ့ ဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်လာတာကလည်း ခန့်မှန်းချက်အတိုင်းမှန်ကန်နေပါတယ်။
ဒီအပြင် WHO, ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေးဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ Manga စာသားထဲမှာ ပါလာခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာ လုံးဝပဲ ကိုရိုနာကူးစက်ရောဂါနဲ့ကိုက်ညီနေပါတယ်။
ဒါ့အပြင်အံ့သြဖို့ကောင်းတာက ဒီတစ်ခေါက်မိတ်ဆက်ပေးချင်တဲ့ အဓိက Manga ပါ။
ကျွန်မမြင်ခဲ့တဲ့အနာဂတ် ဆိုတဲ့ Manga ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၉၉ ခုနှစ်ကဖြန့်ချိခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊ ခေါင်းစဥ်ကနေလည်းနားလည်ရတဲ့အတိုင်း အနာဂတ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုဖြစ်ပါတယ်။
စာရေးသူက သူမမြင်ခဲ့တဲ့ ကြိုတင်ခန့်မှန်းအိပ်မက်အကြောင်းဖြစ်ပြီး၊ အင်္ဂလန်မင်းသမီးဒိုင်ယာနာကွယ်လွန်ခြင်း၊ Queen bandရဲ့ rock အဆိုတော်ဖြစ်တဲ့ Freddie Mercury ဟာကူးစက်ရောဂါကြောင့်သေဆုံးမယ်ဆိုတာကိုလည်း ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့ပေမဲ့၊ သူမပြောတဲ့စကားတွေကိုဘယ်သူကမှမယုံကြည်ခဲ့ကြပါဘူး…။
ဒါဆို Manga အဖြစ်ထုတ်ခဲ့မယ်ဆိုပြီး ဒီ Manga ကိုရေးခဲ့ပါတယ်။
Great Qinghai Wave ၂၀၁၁ မတ်လ
ဖြစ်ခဲ့တယ်နော် ၊ ဂျပန်အရှေ့ပိုင်းငလျင်ကြီး…
လအထိ အတိအကျမှန်ကန်နေတာက ခြိမ်းခြောက်မှုသက်သက်ပါပဲ။
ဒီစာအုပ်ဟာ လက်ရှိဂျပန်ရဲ့အင်တာနက်ပေါ်မှာကောလဟလထွက်နေပြီး၊ စာအုပ်အဟောင်းရဲ့ဈေးက ယန်း ၁၀ သောင်းကျော်တောင်တက်သွားပါတယ်။…. ပြန်လည်ထုတ်ဝေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းကြောင့် ဈေးကျသွားခဲ့ပေမဲ့၊ တီဗွီမှာလည်းဖော်ပြလာတာကြောင့် အကြောင်းအရာပိုပြီးကြီးလာခဲ့ပါတယ်။
ဒီအပြင် အခုနကအနာဂတ်အကြောင်းအရာကိုလည်း ရေးထားပါတယ်။
၂၀၀၆ ခုနှစ် ၈ လပိုင်း ၂၀ ရက်နေ့ ဆိုပြီး ဟောကိန်းထုတ်ထားပေမဲ့၊ လွဲချော်နေပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သူမဟာဒီနေရာမှာမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် အဲ့ဒါရဲ့နောင် ၁၅ နှစ်နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လိမ့်မယ်။ အဲ့ဒါမှမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင် နောက် ၁၅ နှစ်တိုးပြီးဖတ်စေချင်တယ်လို့ ရေးထားခဲ့ပါတယ်။
၂၀၂၁ ခုနှစ် ၈ လပိုင်း ၂၀ ရက်
အမှန်တကယ် ဖူဂျီတောင်ဟာပေါက်ကွဲဖို့ လက်တစ်ကမ်းလေးမှာပဲ ဆိုတဲ့အချက်အလက်ထွက်နေပြီး၊ ဂျပန်အစိုးရကလည်းရပ်တန့်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်များလား၊ ဒါမှမဟုတ် ၂၀၃၆ ခုနှစ်မှာကျရောက်မှာလား?
ဘယ်ခုနှစ်မှာပဲကျရောက်ပါစေ၊ ဖူဂျီတောင်ပေါက်ကွဲရင်တော့ တိုကျိုလည်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့လွတ်မှာမဟုတ်ပါဘူး….။
ဒီရက်တွေမှာ စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ စောင့်ကြည့်နေဖို့ပဲရှိပါတယ်။
မထင်မှတ်ထားတဲ့ထိတ်လန့်စရာ။ Bon Odori အက၏မူလအစ